Senateran’i Madagasikara : Manameloka ny fanakorontanana -
AccueilRaharaham-pirenenaSenateran’i Madagasikara : Manameloka ny fanakorontanana
20/04/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nivondrona, niray feo, niara-nanatanteraka valandresaka ho an’ny mpanao gazety omaly tetsy amin’ny trano maitson’Anosikely ireo senatera avy eto Antananarivo sy ny solontena avy amin’ny faritra, izay nilaza fa manohitra tanteraka ny hetsika fanakorontanana ny firenena sy ny fampidirana amin’ny kizo lalina indray. Miisa hatramin’ ny roapolo mahery ireo senatera izay avy eto Antananarivo nanaraka ny mpanao gazety, ary miray fo sy feo amin’ny antso tanterahin’ izy ireo avokoa ireo senatera rehetra. Nitondra ny tenin’ireo senatera, ny loholon’i Madagasikara Andriambololona Mananjary telo, ary nitondra ny antso amin’ ny tsy tokony hisian’ ny korontana intsony tahaka ny tamin’ ny taona 2002, 2009. Nambaran’izy ireo mazava ihany koa fa “mba tsy hiverenan’ny krizy intsony, mba tsy hinanana ambolony no anton’ny fanazavana izay hoentinay. Lalàm-pifidianana mantsy no entin’ny sasany hanaovana famoriam-bahoaka” hoy hatrany ireo senatera teny ampiandohana.
Manoloana io fanelezana lainga amin’ ny vahoaka amin’ny filazana fa noho ny tsy fahatomombanan’ny lalàn’ny fifidianana no anton’ny hetsika sy ny hoe tatitra tanterahin’ireo solombavambahoaka ireo, dia nambaran’ny senatera Abdirassoul Mohamed Mourad fa tsy marina io fanaratsiana hiniana aely io “ 80 % ny voarakitra anatin’ny lalàm-pifidianana io dia efa nampiasaina tamin’ ny fifidianana 2012. Eo ihany koa ny ady amin’ ny kolikoly, ary ny famotsiam-bola” hoy hatrany ity loholona ity. Nohazavainy tamin’ izany ihany koa ny antanan-tohatra izay nolalovan’ ny lalàna toa ny fakan-kevitra izay notanterahina ka nivohan’ny tolo-kevitra miisa 40, ary ny 38 tamin’ izany no notazonina. Ny roa tamin’izany ihany anefa hoy izy no tsy notazonina, ary anisany ny mikasika ny famerena ny vola ampiasain’ny kandida, ankilany kosa anefa dia nambaran’ny loholona hatrany fa “tsy marina ny filazana fa tsy soratana amin’ ny solaitra izany ny vokatra amin’ ny biraom-pifidianana tsy marina izany, ny PV dia samy manan -kery avokoa, ary tsy misy ny olana rehefa misy sonia. Izany hoe ny tena izy sy ny dika mitovy, ahafahana manamarina ny vokatra” hoy hatrany ny fanazavana. Lalàna madio ary hahazoana kandida madio no fototry ny lalàna izay nofidiana fa tsy sanatria akory tahaka ny fanazavana diso izay ho entin’ ny sasany, hoy hatrany ireo senatera ireo
Noho izany manoloana ny zava- misy dia nanao antso amin’ ny mponin’Antananarivo ireo loholona mba hanao zava-dehibe ny fihavanana sy ny firaisankina izay soatoavina mampiavaka ny Malagasy. Noho izany hoy ireo loholona izay nanao fanambarana “samia mikatsaka ny filaminana sy fampandrosoana ho an’ ity renivohitra fa tsy ho kianja hifandrotehana sy hifampihantsiana ary hifankahalana foana noho ny safidy politika tsy mitovy. Koa takio sy arovy ny zonao amin’ ny maha olom-pirenena vanona anao, fa mila miasa ampitoniana sy mianatra tsy amin’ ny tebiteby ny olona” hoy ny antso izay novakian’ ny senatera Hanitra Ramavoarisoa. Tafiditra anatin’ ity antso ity ihany koa ny tokony handraisan’ny vahoaka tsirairay ny andraikitra tandrify azy avy “ koa manoloana ny zava-misy izay miendrika fanakorontanana, dia ataovy toa ny tsy misy izay antso sy hevitra mitaona anao ho amin’ ny fankahalana izay mety hitarika korontana………..tsarovy fa manana adidy hitondra filaminana , fahatoniana ary fanatsarana ny fiainan’ny Malagasy rehetra na ny mpitondra sy ireo mpanohana azy, na ny mpanohitra. Koa raiso ny andraikitra hitandroana ny firaisankinam-pirenena ho fitsinjovana ny ho avin’ ny taranaka” hoy ny antson’ ireo loholona teny ampamaranana.
Taorian’ny fitsidihana nataon’ny Filoha tany Sina : Tonga sahady ireo mpamatsy vola
Taorian’ny fitsidihana ofisialy nataon’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery tany Sina dia tsy niandry ela ireo mpamatsy vola fa tonga eto Madagasikara sahady hijery ny fahafahana raharaham-barotra azo atao. Ao anatin’izay indrindra, tonga nitsidika ny minisitry ny ...Tohiny